Maalinta: Abriil 25, 2020
Wuxuu yiri waxaa jiray bam gacmeedkeyga oo waxaan dul fariistay wadada laamiga ah ee Marmaray
Waxaa la fahamsan yahay in qofka sababay argagaxa leh isagoo leh "bam baan ku dhex leeyahay boorsadayda" oo ku taal Istanbul isagoo maraya waddooyinka Marmaray si uu is-dilo. 29-sano jirka G D., oo bartay inuu ugu yero booliiska 'i garaacay', wuxuu ahaa bukaan muruq ilaa iyo markii uu ahaa da'da 7. [More ...]
Waxaa dib ugusoo laabtay Fursad mamnuuc ah oo ku taal magaalada Bursa 2 Kun oo Tan oo Asphalt ah oo lagu daadiyay 30 Asbuuc
Marka loo eego baaxadda halganka lagula jiro 'Covid 19', Dawladda Hoose ee Magaalada, oo u rogtay bandowgu wuxuu ku soo rogay fasaxa usbuucyada ee Bursa fursado, wuxuu ku daadiyay 2 kun oo tan oo ah asphalt 30 todobaad gudahood shaqooyinka sii socda habeen iyo maalinba. Fayras Corona [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay in boqolkiiba 14 kaydiyaasha gurmadka degdegga ah ee gudaha iyo qaran, kuwaas oo la bilaabay in la soo saaro 100 maalmood gudahood, inay yihiin heerar caalami ah. [More ...]
Mutadawiciinta ku shaqeysta baaskiiladaha ayaa waliba taageeraya 'We Are Solidarity'. Tabaruceyaasha Baaskiiladu waxay la kulmaan baahiyaha wax gadashada ee muwaadiniinta ka weyn 65 sano kuwaas oo guriga ka bixi karin markay codsadaan xarunta wicitaanka ee Bisi-Support. Wajahadda la dagaallanka coronavirus faafa, İzmir [More ...]
Dejinta Ramadaanka ee loogu talagalay ESHOT, Metro, Tram, İZBAN iyo İZDENİZ Safarada ku yaal İzmir
Bisha Ramadaan awgeed, degmada İzmir ee Magaalo-weynaha ayaa isbeddelo ku sameysay duullimaadyada Metro, Tram, İZBAN iyo İZDENİZ maalmaha shaqada. Duulimaadyada kahor saacadda afurka waa ay soo noqnoqdeen. Basaska ESHOT iyo İZULAŞ waxay u dhexeeya 16.00-21.00 maalmaha shaqada [More ...]
Shuruudaha Wax Soosaarka Maxalliga ah ee Gawaarida Nidaamka Tareenka
Xaqiiqda ah in gawaarida nidaamka tareenka ay bixiyaan fursad safar oo aamin ah oo raaxo leh, oo dhaqaale ahaan iyo deegaan ahaan ku habboon gaadiidka xamuulka xamuulka, ayaa si weyn looga doorbidey labadaba magaalooyinka iyo magaalooyinka dhexmaraba. Sidaa darteed, [More ...]
Ambassador Turkey ee Lütfullah Vatican Meteors, isbedelka ka dhici doona gaadiidka Italy ee dadweynaha ugu saameeyeen faafa ee-19 ka Covidien for images la wadaago. Magaalada Giuseppe Conte ee dalka Talyaaniga, ayaa kamid ah wadamada sida xun u saameeyay cudurka coronavirus ee qaarada Yurub [More ...]
Jidadka tareenka ugu quruxda badan adduunka waa in la arkaa
Tan iyo markii tareennada la soo saaray qarnigii 19-aad, waxay sii wadaan inay saameyn ku yeeshaan socdaalayaasha jecel inay beddelaan gobollada ay gaaraan waxayna sahamiyaan quruxda dabiiciga ah iyo juquraafi ahaan ballaaran. Safarrada tareenadu laf ahaantooda waxay leeyihiin ganacsi casri ah iyo [More ...]
IMM waxay ka bilowdey howlaha nadaafadda iyo nadiifinta 245 isbitaal oo ku baahsan magaalada. Shaqooyinka waxaa sidoo kale ku jira 739 gawaarida iyo 2360 shaqaale ah. Marka laga reebo isbitaalada, aag 232 garoon kubadeed ah, [More ...]
Codsi rasmi ah ayaa loo sameeyay Wadada 3-aad ee garoonka Diyaaradaha Istanbul
Maraakiibta dagaalka ee Mareykanka oo hoos yimaad COVID-19
Ka dib markab kuwa xamuulka qaada ee maraakiibta dagaalka ee Mareykanka, COVID-19 kiis ayaa sidoo kale laga helay burburiye. Kovid-18 ee 19 askari oo ku saabsan burburka 'USS Kidd' oo ku yaal koonfurta Mareykanka [More ...]
Bandoowga Bursa wuxuu u rogay Fursad
Ka faa'ideysiga bandowga 4-ta maalmood ah, Dowlada hoose ee Magaalada, ayaa dhanka kale waxay ka shaqeysaa dhir udgoon dhulka hoostiisa ku yaal halbowlaha guud ee bartamaha magaalada, dhanka kale, marka laga reebo degmooyinka dhexe sida Cusmaaniga, Yıldırım iyo Nilüfer. [More ...]
Ololaha Wadajirka ee ganacsiga elektaroonigga ah ee e-meheradaha loo yaqaan 'SMEs' oo ka socota Wasaaradda Ganacsiga
Wasaaradda Ganacsiga waxay bilaabtay olole midnimo ah oo lagu taageerayo SMEs dhinacyada ganacsiga elektaroonigga ah. Si loo yareeyo saamaynta xun ee Covid-19 masiibada, oo saameysa adduunka oo dhan, SMEs, iyo in la sii wado ganacsiga SMEs muddadan. [More ...]
Dejinta Tareenka Qaranka ee Korantada ayaa la tijaabin doonaa 29-ka May
Wasiir Varank wuxuu yidhi, “Imtixaanada tareennadeenna qaran, oo xawaareyn kara illaa 160 kiiloomitir saacaddii, ayaa bilaaban doona dhowaan muwaadiniinteenuna isticmaali doonaan tareenadan. 3-ka May, waxaan dejin doonaa oo tijaabin doonnaa 29-da tareenka. Maalgashiga 2020 [More ...]
Cumhuriyet Mahallesi ayaa sidan u Neefsanaya
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, oo isku-xidhka magaalada ka dhigta dariiqyo adag, oo casri ah, waxay ku shaqeysaa shaqo firfircoon oo ah geedi socodka asphalt ee 2 160 mitir u dhexeeya jaamacadda iyo webiga Melet ee Cumhuriyet Mahallesi. Dhamaadka daraasadaha [More ...]
Maanta taariikhda: 25 April 1946 Istanbul-Ankara
Taariikhda Maanta, Abriil 25, 1912 Maamulka Hicaz Railway waxay ka dhaqaaqday Sadaret waxayna ugu horreyn ku xirneyd Wasaaradda Dagaal Oktoobar 9, 1912, waxaana laga qaaday Sadaret iyadoo wareegto ku meel gaar ah la daabacay Janaayo 11, 1913 iyo evkaf. [More ...]
Waa kuma Bedriye Tahir Gökmen?